Oke onu: Nwepu Ngwuputa Ntanetiri Nke oma - Ogwu Ocha
Nchịkọta weebụ bụ ngwá ọrụ dị irè maka ma ndị nyocha weebụ na ụlọ ọrụ ndị na-achọ ịchọta ọtụtụ ozi sitere na weebụsaịtị dị iche iche, dịka Facebook, Amazon, eBay na-akpaghị aka. Octoparse bụ nnukwu usoro ngwanrọ nke na-enye ndị ọrụ ya nnukwu nchịkọta iji nakọta data ma gbanwee ya na faịlụ dị ka HTML, Excel, na TXT. Ihe ndị a bụ ụfọdụ nhọrọ dị iche iche nke Octoparse nyere:
Octoparse bụ ngwá ọrụ dị mfe na-enyere ndị ọrụ iwepụ ọdịnaya site na weebụsaịtị. Ọ na-arụ ọrụ na ibe weebụ dị ike, gụnyere nchịkọta data na njedebe. Ọzọkwa, ọrụ igwe ojii ya nwere ike inweta ma chekwaa nnukwu data - space allocated.
Na-achịkọta Data Zoro Ezo na Websaịtị
N'ọtụtụ okwu, ndị na-enyocha weebụ na-achọ ịchọta data kpọmkwem site na ibe weebụ, ma ha enweghị ike ịchọta ihe ọmụma achọrọ, n'ihi na nke nchịkọta weebụsaịtị ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla ọzọ. Onu ogugu nwere ike ichọta na wepu ihe nile ezoro ezo.
Na-enweta Inwe Ọdịnaya na Infinite Scrolling
Nchịkọta data na mpịakọta na-enweghị ngwụcha nwere ike ịbụ ọrụ siri ike. Ndị nyocha weebụ kwesịrị ịpịgharịa gaa na ala nke ibe ọ bụla nke weebụsaịtị ha gara ileta ihe ederede ma ọ bụ ihe oyiyi. A ga-ebugharị ihe ndị a mgbe niile ka ha na-asọga na ala nke ibe.
Octoparse nwere ike inyere ndị ọrụ aka wepụ niile hyperlinks e bipụtara na weebụsaịtị. N'ezie, ọ na-enye ndị ọrụ ụzọ dị mfe iji rụọ ọrụ ọtụtụ narị IP, ma n'otu oge ahụ, ọ na-enye ọtụtụ nhọrọ dị elu, dịka Ajax Timeout, arụ ọrụ XPath, wdg.Ọzọkwa, Octoparse nwere ike ịdọrọ data maka ndị na-enyocha weebụ na arịrịọ ndị a kapịrị ọnụ na iji ihe ịga nke ọma na-enye data a haziri ahazi.
Maka ndị ọrụ, ọ ka mma ịkekọrịta ọrụ ha, ọ bụrụ na ịntanetị bepụ. Kama ịchọta data ha site ná mmalite, ha nwere ike ịhapụ ọrụ ụfọdụ n'ime ọrụ abụọ.
Site na Octoparse, ndị ọrụ weebụ nwere ike ime ọtụtụ ihe, dịka ịmepe otu ibe weebụ, ịbanye n'ime akaụntụ, budata ihe oyiyi, itinye ederede na ọtụtụ ndị ọzọ. Octoparse na-enyekwa ndị ọrụ ya ọnọdụ dị elu iji nyere ha aka ịnagide data mgbagwoju anya. Dịka ọmụmaatụ, iji ọnọdụ a, ndị ọrụ kwesịrị ịdọrọ ma dobe blocks n'ime sistemụ arụmọrụ iji hazie ọrụ dị iche iche. Ọnọdụ dị mma na-enye ndị ọrụ nhọrọ iji gbanwee ibe weebụ ọbụla na Excel na ịpị otu bọtịnụ. N'ezie, ọnọdụ a na-arụ ọrụ nke ọma na tebụl nke ibe ederede, dịka nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ ụdị ibe.